Filtrer les éléments par date : mardi, 08 octobre 2019
mardi, 08 octobre 2019 22:06
Diplaomasia: Voaray eo anivon’ny UNESCO Rtoa Yvette Sylla
Nanolotra ny taratasy fanendrena azy ho ambasadaoro, solontena maharitry ny Repoblikan’i Madagasikara eo anivon’ny UNESCO tamin’i Audrey Azoulay, Tale jeneralin’ity Sampan’ny Firenena Mikambana misahana ny fanabeazana, siansa ary ny kolontsaina ity, i Yvette Sylla. Tao amin’ny foiben-toeran’ny UNESCO no nanatanterahana izany androany 8 oktobra 2019.
Ny 18 septambra 2019 i Yvette Sylla, vady navelan’ny praiminisitra teo aloha sady efa filohan’ny Antenimieram-pirenena teo aloha Jacques Sylla, no voatendry, nandritra ny filankevitry ny minisitra, ho Masoivohom-pirenena, sady solontena maharitr’i Madagasikara eo anivon’ny UNESCO ao Paris.
Sambava: Vola sandoka no nandoavan’ireo mpisoloky ny vidin’ny lavanila 22kg, mitentina 22 tapitrisa Ariary
Fahavoazana tsy roa aman-tany no nahazo an’ity tantsaha mpamokatra lavanila iray avy any amin’ny Kaominina Nosiarina, tonga teto Sambava omaly alatsinainy 7 oktobra 2019. Lasan’olona ny lavanila 22kg, vola voarainy anefa sandoka avokoa. Nipenimpenina, efa teo ambavahaonan’ny famonoan-tena ilay tantsaha voasoloky.
Nifanao fotoana teo Antanifotsy 2, Fokontany iray eto Sambava tampon-tanàna, ilay tantsaha niaraka tamin’ny lavanila maina 22kg sy ny mpividy lavanila. Telo lahy ireto farany no tonga. Natao ny ady varotra. Nifanaraka ny andaniny sy ankilany fa iray tapitrisa Ariary ny vidin’ny iray kilao. Nanome vola mbola tao anaty fonosana an’ilay tantsaha ireo mpividy. Nilaza ireto farany fa holanjaina aloha ny entana, hohamarinina. Tsy nanana ahiahy ilay tantsaha, ny vola be 22 tapitrisa Ariary rahateo efa anaty fonosana eny an-tanany.
mardi, 08 octobre 2019 20:40
Paositra Malagasy: Feno 25 taona, hotokanana ny masoivohony faha-255
Hankalaza fety maro sosona ny Paositra Malagasy ny andron’ny 9 oktobra 2019. Eo ny Andro manerantany ho an’ny Paositra, izay ankalazaina isaky ny 9 oktobra. 1994-2019 : feno 25 taona katroka amin’ity 2019 koa izao no niofon’ny PTT ho Paositra Malagasy.
Hanamarika io andron’ny 9 oktobra 2019 io ny fitokanana ny masoivoho faha-255 ny Paositra Malagasy eo Vassacos Antanimena Antananarivo. Efa nialohavana fampirantiana hajia teny Antaninarenina moa ny hetsika androany 8 oktobra 2019.
Ny Paositra Malagasy no sampandraharaham-panjakana manana masoivoho maro indrindra manerana ny Nosy.
Miandrivazo: Zandary iray tazomina am-ponja vonjimaika
Fikasana hamono olona tamin’ny basy. Tranga izay niseho tamin’ny 28 septambra 2019, no niampangana an’ity zandary ity, izay manana galona G1C (Gendarme de 1ère Classe) miasa ao amin’ny brigadin’ny Zandarimaria Ankondromena.
Androany talata 8 oktobra 2019 izy no natolotra ny Fampanoavana tao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Miandrivazo, taorian’ny fanomezan-dalana avy amin’ny lehibe nirosoana tamin’ny famotorana azy.
Nivoaka tamin’ny 2ora latsaka ny didy savaranonando itazomana am-ponja vonjimaika an’ity zandary ity ao amin’ny Fonjaben’i Miandrivazo.
Tafakatra 57 aminy izao ireo zandary niditra am-ponja noho ny fandikan-dalana, kolikoly, firaisana tsikombakomba amin’ny jiolahy, heloka bevava vitany. Misy 51 hafa ihany koa efa vita famotorana noho ny raharaha anenjehana azy ireo, ary efa any amin’ny Fampanoavana ny dosien’izy ireo.
Botozaza Pierrot: Hanohana an’i Nantenaina amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna
Nanao fanambarana i Botozaza Pierrot, fa rehefa nandinika izy sy ny ekipany dia hanohana an’i Nantenaina amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna hotanterahina amin’ny 27 novambra 2019.
Praiminisitra lefitra misahana ny toekarena tamin’ny tetezamita i Botozaza Pierrot. Efa minisitry ny Fitaterana tamin’ny 2008, efa voafidy solombavam-bahoakan’i Toamasina tamin’ny anaran’ny antoko Tiako i Madagasikara talohan’izay. Efa Tale jeneralin’ny SPAT (Société du Port à gestion Autonome de Toamasina). Nirotsaka hofidiana tamin’ny anaran’ny tenany manokana ho depioten’i Toamasina I tamin’ny aprily 2019. Filohan’ny fikambanana ZAMI (Zanak'Ambanivolo Mivoatra) izy.
Kandida narotsaky ny IRD amin’ny fifidianana Ben’ny tanànan’i Toamasina i Nantenaina, mitondra ny laharana voalohany (1) amin’ny bileta tokana.
mardi, 08 octobre 2019 17:17
Besarety – Antananarivo: Diovina ny tatatra
Tonga ety Besarety ireo fitaovana vaventy hisava sy hanala ireo fako manentsina ny tatatra fivarinan’ny rano izay anisany fototra mahatondraka ny rano amin’ity faritr’i Besarety sy ny manodidina, ato amin’ny Boriborintany faha-3 Antananarivo Renivohitra ity, rehefa fahavaratra.
Misy ny asa tanamaro mifanindran-dalana aminy.
Fanadinana: Mifanitsaka ny Bacc « 2e session » sy ny fanadinan'ny CNTEMAD
Hahemotra amin’ny fotoana tsy mbola voafaritra ny fanadinana nasionaly enim-bolana faharoa ho an’ny CNTEMAD araka ny fanambarana nataon’ny sekoly androany talata 8 oktobra 2019, fanadinana tokony hatao ny 21 hatramin'ny 25 oktobra 2019.
Noraisina ny fepetra hoy ny sekoly satria mifanindry ny andro anatanterahana ny fihodinana faharoa manokana amin’ny fanadinana bakalorea ankapobeny, izay hanomboka andro alarobia ny 23 oktobra, ary hifarana ny sabotsy 26 oktobra 2019, sy ny fanadinana amin'ny fampianarana ampitain-davitra sahanin'ny CNTEMAD.
mardi, 08 octobre 2019 14:57
IST Antananarivo: Nahemotra ny fifaninana hidirana taona voalohany “Formation initiale”
Raha tokony ho tanterahina ny 23 sy 24 oktobra 2019 dia hahemotra ho amin’ny 13 sy 14 novambra 2019 ny fifaninana hidirana taona voalohany “Formation initiale” ao amin’ny IST na Institut Supérieur de Technologie d’Antananarivo, araka ny fampahafantarana nataon’ny tompon'andraikitra voalohan’ity ivontoerana ambony ity.
mardi, 08 octobre 2019 14:47
Swami Sivananda: 123 taona izy izao, raha ny voarakitry ny pasipaoro eny ampelan-tanany
Raha marina sy voaporofo ny daty nahaterahany voarakitra ao amin’ny pasipaorony dia i Swami Sivananda no zokiolona indrindra miaina eto amin’ity bolantany iainantsika ity.
Teraka tamin’ny 8 aogositra 1896 tany Behala, Inde izy. Na ireo mpiasan’ny seranam-piaramanidina tao Abou Dhabi, Dubai aza gaga sy zendana raha nahita ny taonan’i Sivananda, nefa mbola nahavita nitaingina fiaramanidina avy any Kolkata hiazo an’i Londres, niaraka tamin’ny fiaramanidin’ny kaompania Ethihad Airways, raha nijanona kely tao Abou Dhabi Dubaï.
Vao enin-taona i Swami Sivananda dia efa kamboty, namoy ny ray sy reniny ka fianankaviany no nitaiza azy.
mardi, 08 octobre 2019 13:55
Betsiaka- Ambilobe: Mitam-piadiana ireo mpamotika ny ala arovana
Valo lahy mitam-piadiana no tra-tehaka mikapa hazo sy manao saribao ao amin’ny faritra arovana Andrafiamena, Kaominina Betsiaka, Distrika Ambilobe. Fiaraha-miasan’ny zandary avy amin’ny « Poste avancé » Betsiaka, ny foibem-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra miaraka ny ekipan’ny Fanamby sy ny KMT (Komity Miaro ny Tontolo iainana) no nahazoana ny vokatra.
Eo ampelantanan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antsiranana ny raharaha ankehitriny. Manahy valifaty ny ekipan’ny Fanamby sy ny KMT (Komity Miaro ny Tontolo iainana) raha votsotra amin’izao ireto andian’olona ireto.